Nuur Cadde iyo Masuul sare oo ka tirsan Midawga Afrika oo Kulmay | maakhir.com
Muqdisho:- Sarkaalka ugu saree marka laga hadlay arimaha Amaanka iyo Nabad gelyada ee Ururka Midawga Afrika ninka lagu magcaabo Siciid Djinit ayaa Raisalwasaaraha Somaliya Nuur Cadde u soo bandhigay qorshe Cusub oo dalka Somaliya nabad lagaga dhalin karo, isaga oo Raisalwasaaraha dhinacyo badan ka tusay arimaha tagaan haatan dalka Somaliya.
Mr Djinnit ayaa ku sugnaa magaalada Muqdisho muddo afar saacadood ah isagoo kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Somaliya oo uu ugu sarreeyo ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Nuur Xassan Xuseen (Nuur Cadde) waxan la sheegay inay Nuur Cadde iyo Masuulkaasi ka socoda Midawga Afrika ay aad uga wada hadleen xaalada Amaan ee ka jira Dalka Somaliya gaar ahaan caasimada dalka ee Muqdisho.
Mr Djinnit ayaa sheegay inuu kulanka la qaadanayay Mr Nuur Cadde uu usoo bandhigay afar qodob oo muhiim u ah nabadda dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in qaab dib u heshiisiineed loo maro xoojinta hawlaha siyaasadda dalka ee kala dhantaalan, in beesha caalamku si ballaadhan ay ugu lug yeelato hawlgallada nabad ilaalinta, in jawi nabad ah loo abuuro hawlaha gargaarka bani’aadamnimada iyo in la dhiso tayada Hay’adaha dastuuriga si loo wajaho caqabadaha horyaalla.
Gegagebadii Masuulkaasi waxa uu sheegay inay hadii wadiiqadaasi ay Midawga Afrika soo bandhigeen lagu dhaqaaqo in Dalka Somaliya Nabad lagu soo dabaali karo, isaga oo waliba ka codsaday Dawlada Somaliya inay arimahaasi hir galiyaan.
Si kastaba xaalku ha ahaadee tan iyo intii uu Masuulkaasi ku sugnaan Aqalka Villa Somaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka socotay magaalada Muqdisho Duqayn xoogan oo loo gaysanayay goobo badan oo muhiim kuwaasi oo ay ugu horaysa Hoobiyaal lagu Tuuray Garoonka Diyaaradaha ee Cadan Cadde.
« Xukuumada Puntland iyo Koox Isimo ah oo ka soo booqashay Gobolka Sool ayaa Kulan wada qaadan doona Maalinta Bari ah
Dagaal Culus ayaa ka dhacay Deegaanka Balli doogle »